I-Feedstock Inkcazo kunye nemizekelo
I-Feedstock kwiKhemistry nobunjineli
I-feedstock ibhekisela kuyo nayiphina impahla engaphumelelwanga esetyenziselwa ukubonelela inkqubo yokuvelisa. Iimpahla zokutya ziyimpahla ye-bottleneck ngenxa yokuba ukufumaneka kwazo kunika amandla okwenza iimveliso.
Ngomlinganiselo walo jikelele, isondlo sezinto ezibonakalayo (umzekelo, i-ore, imithi, amanzi olwandle, amalahle) eguqulelwe ukuthengiswa kwimimandla emikhulu.
Ubunjineli, ngokukodwa ngokubhekiselele kumbane, isondlo sithetha ngokubhekiselele kwizinto ezihlaziyiweyo, eziphilayo ezingaguqulelwa ngamandla okanye kumbane.
Kwi-chemistry, i-feedstock iyimichiza esetyenziselwa ukuxhasa ukuphendula kwamakhemikhali amakhulu. Ixesha eliqhelekileyo libhekisela kwizinto eziphilayo.
Eyaziwayo Njengaye: I-feedstock ingabizwa ngokuba yimpahla eluhlaza okanye izinto ezingaphunyekanga. Ngamanye amaxesha i-feedstock isichazamagama se-biomass.
Ukusebenzisa inkcazo ebanzi yesondlo sokutya, nayiphi na imithombo yendalo ingaqwalaselwa njengomzekelo, kubandakanywa nayiphi na imaminerali, izityalo, okanye umoya okanye amanzi. Ukuba ingahlonywa, ikhulile, ibanjwe, okanye iqokelelwe kwaye ayivelwanga ngumntu, yinto eluhlaza.
Xa isondlo sezinto eziphilayo ezihlaziyiweyo, imimiselo iquka izityalo, izityalo, izityalo, i-algae, i-petroleum, kunye negesi yendalo. Ngokukodwa, i- oil oil engcolileyo yindlela yokutya yokuvelisa i -petroli . Kwi-shishini likhemikhali, i-petroleum iyisondlo sezinto ezininzi zeekhemikhali, kuquka i-methane, i-propylene kunye ne-butane. I-Algae isondlo se-hydrocarbon, i-Corner is feedstock ye-ethanol.
Inkcazo engapheliyo (i-Chemistry and Technology)
I-PKa Inkcazo kwiKhemistry
Iingoma eziphezulu zeFernando Ortega
Indlela yokudibanisa isenzi esithi "Khupha" ngesiTaliyane
Awuyivuyo Ngaba awuzange ukhanyise ukuKhanya?
Ngaba Ndifanele NdiyiCwebe I-Charcoal Drawing?
Iingcaphuno ezibuyisela iSikhumbuzo seSikolo
Yintoni Ubuninzi beNtsholongwane?
Kutheni ufuna iNethiwekhi kwiSikolo njengoMfundi oMdala
Iirekhodi zalawo onke ama-Wrestler ukuThuphisana kwiWrestleMania
Ngaba Iintlanzi Zilala?
Imfazwe Yehlabathi II: USS Ticonderoga (iCV-14)